Iifilimu ezingama-60 eziGqwesileyo zothando lonke ixesha - Iindaba
Abahlobo Nosapho Ekhaya Itekhnoloji Ukutya Ifashoni Yomtshato Imisebenzi Kunye Nemali Iiresiphi #isenzosichasene Nokuxhatshazwa Iinwele Ngamazwe
Ama-65 eeMidlalo zeMidlalo eziBalaseleyo zamaRoma
Nokuba uyakhathala ukuyamkela okanye hayi, wonke umntu uyayithanda into elungileyo Imuvi yothando . IHollywood ibuchwephesha ubugcisa bokutsala iintliziyo zethu ngamabali afanelekileyo e-swoon, ukusuka Kuzalwa inkwenkwezi ukuya Incwadi yokubhalela . Kodwa ke, ezi zikrwela kuphela umphezulu wezihloko ezininzi zothando. Siqokelele ezinye zezona zinto zintle kakhulu, ezonakalisayo, ezinomdla kunye ne-mushy flick ukutyhubela iminyaka. Apha, ezingama-65 zeemovie ezibalaseleyo zothando ngalo lonke ixesha eziza kukuhlekisa, ukhale kwaye, ewe, kholwa kuthando lokwenyani.
Ezinxulumene: Iikomidi ezili-10 eziBalaseleyo zamaRoma ngexesha lonke
thanda iikowuti ze-valentines
Imifanekiso yokuKhangela kweFox
Ingcali yezomzimba, uLeslie Wright (uKumkanikazi uLatifah), ubeka umsebenzi wakhe wephupha esebenzela umdlali webhola yomnyazi, uScott McKnight (oqhelekileyo). Izinto zithatha ukujika kwezothando xa eqala ukuwela kwisigulana sakhe esitsha, ongaziqapheli ngokupheleleyo kwizimbo zakhe ezingaphezulu.
Bukela kwi-Amazon Prime
2. 'KwiMood yothando' (2000)
Ukusekwa kwii-1960s eHong Kong, le bhanyabhanya ifotwe kakuhle ibalisa ibali labamelwane ababini (edlalwa nguTony Leung kunye noMaggie Cheung) abatshatileyo abathandanayo. Njengokuba bejongana noku kungcatshwa, abo babini baqala ukuchitha ixesha elininzi kunye kwaye ekugqibeleni bahlakulele iimvakalelo komnye nomnye.
Qeshisa kwi-Prime Prime yaseAmazon
3. 'Kuzalwa inkwenkwezi' (2018)
Xa imvumi edumileyo uJack (uBradley Cooper) ngengozi efumanisa (kwaye ethandana) nomculi osokolayo u-Ally (uLady Gaga), umzisa kwindawo ebonakalayo kwaye aqale umsebenzi wakhe. Kodwa njengalo naliphi na ibali lothando olukhulu, intlekele ikufutshane nekona.
Imifanekiso yendalo iphela
Ndiyintombazana nje, ndimi phambi kwenkwenkwe, ndiyicela ukuba ndiyithande. Gah, asikhathali nokuba yitshizi kangakanani, eli bali malunga nomnini wevenkile ethandekayo yesiNgesi (uHugh Grant) kunye nomlingisi odumileyo waseMelika (uJulia Roberts, odlala ngokwakhe) yigolide ye-rom-com emsulwa.
ICinema yomgca omtsha
5. 'Uthando kunye neBhola yeBhasikithi' (2000)
UMonica (Sanaa Lathan) kunye noQuincy (Omar Epps) bangabahlobo bobuntwana abanamaphupha afanayo okhuphiswano: ukuba ngumdlali webhola yomnyazi oqeqeshiweyo. Umboniso bhanyabhanya ulandela uhambo lwabo lweminyaka emininzi njengoko benyanzelekile ukuba bakhethe phakathi kobudlelwane babo kunye nemisebenzi yabo esakhasayo.
6. 'Uthando Ngokwenene' (2003)
Iqela leenkwenkwezi (uHugh Grant kunye noColin Firth babandakanyiwe) zama ukuqonda uthando lwabo kunye nokuhleka okuninzi kunye neenyembezi eziphoswe kumxube. Kwaye, kukho iqweqwe eliyindumasi likaMariah Carey's Yonke into endiyifunayo ngeKrisimesi. ' (Kodwa ungayibona le unyaka wonke.)
Ezinxulumene: Esona sifundo sinzima 'sokwenene' kwi-Intanethi
7. 'Kwenzeka Ngobusuku Obunye' (1934)
Eli ziko le-oldie kodwa le-goodie lijikeleze i-heiress eyonakeleyo (uClaudette Colbert) obalekela usapho kwaye wadibana nendoda enomtsalane (uClark Gable) ozimisele ukumnceda. Inyoka? Umntu ongamaziyo onobubele uyintatheli ekhangela ibali. Le yayiyeyona bhanyabhanya yokuqala yokuphumelela onke amaBhaso amaBanga amahlanu eSikolo (eyona Mifanekiso, uMlawuli, iActor, uMlingisi kunye nomdlalo weScreenplay)
Ilandela umfana omnyama omnyama kwizahluko ezithathu ezahlukileyo zobomi bakhe. Endleleni, ubuza ngesondo, ahlangane nabahlobo abatsha kwaye afunde eyona ntsingiselo yothando. Owu, kwaye siyikhankanyile ukuba iphumelele imbasa yeOscar yoMfanekiso oBalaseleyo? (Uxolo, Umhlaba weLa La .)
Xa intombazana encinci kunye ne-kooky encinci, u-Amélie (Audrey Tautou), esiya kumbindi weParis ukuba abe yeta, ufumanisa ubuncwane obulahlekileyo bomntu owayekade ehlala kwigumbi lakhe kwaye ugqiba kwelokuba anikezele ngobomi bakhe ukunceda abo bamngqongileyo. . Udibana nabalinganiswa abaninzi abanemibala apha endleleni kubandakanya nokuba yintoni enokuba ngumdlalo wakhe ogqibeleleyo. Umtsalane, uyonwabisa kunye neklasikhi yangoko nangoko.
10. 'Umoya' (1990)
Ibali elibuhlungu lilandela uMolly Jensen (uDemi Moore), umzobi ohlangabezana nelahleko yomyeni wakhe amthandayo, uSam Wheat (uPatrick Swayze), obuyela emhlabeni njengomoya ongenamandla. Awuzange uphile ude ubone loo ndawo noMoore, uSwayze kunye nodongwe olonakeleyo.
Tsiba iBolen / NETFLIX
11. 'Iintaka zothando' (2020)
Amaxesha ngaphambi kokuqhekeka, uLeilani (Issa Rae) noJibran (Kumail Nanjiani) ngengozi babandakanyeka kwisikimu sokubulala. Ukwesaba ukubiyelwa, aba babini baqala uhambo lokucoca amagama abo. Ngaba banokugcina ubudlelwane babo ngexesha lokungaqiniseki kweemeko?
12. 'Igosa kunye neNkosana' (1982)
Ngelixa Ibhinqa elihle yinyani ye-rom-com yeklasikhi, le drama kaRichard Gere malunga nomfana osemncinci ogqiba uqeqesho lokuqhuba ngenqwelomoya kukujonga okuthe kratya kuthando kunye nokukhula komntu. Gcina izicubu zilindile-uyakusibulela kamva.
IWarner Bros. Imifanekiso
Abanye bazamile, kodwa akukho sibini sebhanyabhanya sinjengo-Ilsa noRick (u-Ingrid Bergman kunye noHumphrey Bogart) bakule ngqungquthela yemfazwe malunga nemililo emibini yakudala ewela iindlela emva kweminyaka yokunxibelelana. (Iifilimu ezimnyama nezimhlophe ze-FTW.)
Ezinxulumene: Ezona Bhanyabhanya zeIonic zeLonke ixesha
Inzululwazi encinci, uLinda (Brie Larson), uthunyelwa eIndiya kwisabelo sokuthengisa irayisi eguqulweyo. Xa efunda ukuba izakutshabalalisa imisebenzi, udibana nomlimi wasekhaya ogama linguRajit (Utkarsh Ambudkar) ukwenza izinto zilunge.
15. 'Ibali lothando' (1970)
Asiqinisekanga ukuba singangena ebhodini ngale layini yokugqibela ye-flick, Uthando luthetha ukuba ungaze uthi uyaxolisa (ayenzi njalo), kodwa le '70s cult classic ilungile kobo busuku xa ufuna nje ukukhala okuhle kakhulu.
Ezinxulumene: Iinkqubo ezili-10 zeTV ezibukelwayo xa ufuna ukulila
16. 'Into Entsha' (2006)
IKenya (Sanaa Lathan) ikrazukile phakathi kwamadoda amabini ahluke ngokupheleleyo. (Isandi esiqhelekileyo?) Yonke le nto iqala xa ebuya umva ngaphandle komhla oyimfama emva kokuqonda ukuba umntu amfunayo akamnyama. Ngaba uza kuyeka ukuthanda kwakhe kwangaphambili kumthintele ekufumaneni iqabane lakhe lomphefumlo?
17. ‘Isidlo sakusasa eTiffany’ (1961)
Ezoeperile, i-Givenchy LBD kunye ne-iconic 'yenza-le klasiki kufanelekile ukubukela iHolly Golightly's (Audrey Hepburn) yesimbo esithandekayo sodwa. Kodwa eli bali elisekwe kwinoveli eyaziwayo kaTruman Capote inezinye izinto ezininzi eziza kuyenza-umdlalo ohlekisayo, ezothando kunye ne-swanky Upper East Side.
Olunye uthandana lwenzelwe ukujija kunye ne-S.O yakho. kwaye kwakhona uthando lwakho omnye komnye. Abanye, njengale, bajongwe ngcono bodwa (okanye kunye neebesties zakho). Ukubonakaliswa okumnandi komtshato kunye nentliziyo ebuhlungu ebonwa nguRyan Gosling noMichelle Williams.
USarah Shatz / iNetflix
19. 'Umntu omkhulu' (2019)
Isenokungabi nolonwabo oluphelileyo, kodwa le bhanyabhanya ibalisa ibali lentombazana (uGina Rodriguez) ophoswa yinkwenkwe yakhe. Ke, uqala i-hoorah yokugqibela kunye neentombi zakhe ezisenyongweni ngaphambi kokuba afudukele eSan Francisco ukuqala ngokutsha.
Imifanekiso yeBuena Vista
20. 'Ubuhle kunye nesilwanyana' (1991)
Lo mboniso bhanya-bhanya we-Disney uthandwayo ngesandla uyiklasikhi kuyo yonke iminyaka. Ngaba ulungile ngokulinganayo? I-remake ka-2017 eneenkwenkwezi uEmma Watson njengo-Belle noDan Stevens njengeRhamncwa. Inguqulelo yentshukumo ephilayo inika intsomi intsingiselo yale mihla, yobukhomokazi esingakhange siyibone isiza.
Bukela kwiDisney +
Izitudiyo zeAmazon / iLionsgate
21. 'Ugula kakhulu' (2017)
Le ayisiyiyo i-rom-com yakho esemgangathweni. Endaweni yoko, le bhanyabhanya ihlekisayo kwaye ihlakaniphile (esekwe kuKumail Nanjiani kunye nebali lothando le-IRL ka-Emily Gordon) iphonononga imixholo yenkcubeko eyahlukileyo kwaye iziva ivuyisa ngokuvuya. Umhlekisi owazalelwa ePakistan uNanjiani (wadlala ngokwakhe) uwela umfundi omncinci uEmily Gardner (Zoe Kazan), kodwa xa efumana isigulo esingaqondakaliyo esimshiya elele isiqaqa, uKumail kufuneka ajongane nabazali bakhe, usapho kunye neemvakalelo zakhe zokwenyani.
Xa igqala lomculi (uWill Smith) ethatha i-novice (uMargot Robbie) phantsi kwephiko lakhe, akubikho thuba lide ngaphambi kokuba ubuhlobo babo bujike bube lolothando. Oko kukuthi, ade ahlukane naye kwaye abe ngumntu ophumeleleyo wobufazi. * Yongeza kumgca wokuhambisa *
23. 'Ibali laseNtshona West' (1961)
Kwicala elingasentla lasentshona, amaqela emigulukudu amabini — ookrebe kunye neeJets — alwela ukulawula ubumelwane. Izinto ziba nzima xa ilungu leJets uTony (Richard Beymer) ewela uMaria (Natalie Wood), udade wenkokheli yeSharks. NguRomeo noJuliet wale mihla onomculo ojijekileyo.
24. 'Iholide yaseRoma' (1953)
Ukwazisa U-Audrey Hepburn Ifilimu yokuqala ethetha ngenkosazana ebaleka abagcini bayo kwaye yathandana nomaphephandaba waseMelika (uGregory Peck) eRoma. Kuyinto enomtsalane ngokumangalisayo, ethandekayo kwaye kufuneka ubukele imuvi yeklasikhi abalandeli.
Ingoma elungileyo yehlobo
25. 'Ifoto' (2020)
Xa umama kaMae (Issa Rae) esweleka ngokungalindelekanga, ushiye imibuzo emininzi. Emva kokufumana ifoto yakudala kamama wakhe ongasekhoyo, ungene ngembali yakhe yosapho okokuqala, okukhokelela kukuthandana okungalindelekanga. Ubunathi eIssa Rae.
Imifanekiso yokuKhangela kweFox / Iifilimu zeMiramax
26. 'iGreen State' (2004)
UZach Braff ukhokele kwaye wenza inkwenkwezi kule filimu imnandi kunye novakalelo malunga nomfana osenkathazweni (uAndrew) obuyela kwidolophu yakowabo eNew Jersey kumngcwabo kanina emva kokuba ethe wahlukaniswa nosapho. UNatalie Portman ongumlingisi weenkwenkwezi njenge-quirky ethanda umdla kunye nabanye abalinganiswa be-offbeat kunye nesandi sokubulala.
27. 'Incwadana yokubhala' (2004)
Owu, yiza. Kwakufuneka sibandakanye eli bali lidala malunga nesibini esabetha amathuba okufumana indlela yokubuyela komnye nomnye. Elo nqanaba likaNowa (Ryan Gosling) ekhwaza Ufuna ntoni? eAllie (uRachel McAdams) uya kuhlala ebetha rhoqo.
28. 'Malunga nexesha' (2013)
Ukusuka kwindoda engasemva Uthando ngenene, Notting Hill kwaye Idayari kaBridget Jones kuza oku kuphakamisa malunga nomfana omncinci oqondayo ukuba unamandla okuhamba ixesha. Isikhumbuzo esihle sokuxabisa yonke imihla (kunye nokuba uRachel McAdams uyamangalisa kuyo yonke into).
StudioCanal / Inkampani ye-Weinstein
Le melodrama malunga nabafazi ababini abathandanayo kwii-50s yenziwe kakuhle kwaye igcwele ingqokelela kunye nomoya. Ibali liqala xa uTherese Belivet (Rooney Mara) ejonga uCarol (uCate Blanchett) kwivenkile yesebe, kwaye enye yimbali.
30. 'Intlawulelo' (2007)
Awuyi kukwazi ukukrazula amehlo akho ngaphandle kwesikrini ngexesha lonto Indawo elayibrari noJames McAvoy noKeira Knightley (kunye nelokhwe yakhe eluhlaza). Kungekudala emva koko, izinto zithatha indawo etshabalalisayo njengoko ezi zithandane zimbini ziqhekeka ziintsapho eziphazamisayo.
31. 'Ilanga elingunaphakade lengqondo engenabala' (2004)
Emva kokwahlukana okumanyumnyezi, isibini esingahlukaniyo (uJim Carrey noKate Winslet) bacime zonke iinkumbulo zobudlelwane babo kule ndawo ibangela iintlungu, umdlalo weqonga owabetha ithiyetha emva konyaka ka-2004. Ngaba bangamelana nelahleko yomntu abangazange uyazi ukuba ikhona?
32. 'iTitanic' (1997)
Asinazintloni zokuvuma ukuba siyibonile le midlalo yeqongaMbiniamaxa amathathu. Kwaye nangona sisazi ukuba siphela njani (sonakala: inqanawa iyatshona), iintliziyo zethu zisemiqhubelekaXhuma luvuyo ngalo lonke ixesha uJack noRose bedanisa kunye kwaye bazobe imizobo enganxibanga.
Iifoto zakwaSony zakudala
33. 'Ndibize Ngegama Lakho' (2017)
Olu thando luqhakazileyo phakathi kwenkwenkwana eneminyaka elishumi elinesixhenxe kunye nomncedisi kuphando lukayise lwenzeka kumfanekiso ogqibeleleyo we-1980s e-Itali. Ibali lothando lokuqala olusekwe kwinoveli eyaziwayo nguAndré Aciman kunye neenkwenkwezi kwiTimothée Chalamet kunye noArmie Hammer. Ngaba sifuna ukuthetha ngaphezulu?
34. 'Ama-Asiya Aphambeneyo Acebileyo' (2018)
Ngokusekwe kwinoveli kaKevin Kwan ka-2013 ethengiswa kakhulu enegama elifanayo, olu comedy lothando yifilimu yokuqala enkulu yaseHollywood enabaninzi kunye nabasebenzi baseAsia ukusukela Iklabhu yovuyo lwethamsanqa Ngo-1993 (NBD). Ilandela iNew Yorker yomthonyama uRachel Chu (uConstance Wu) njengoko ehamba nesoka lakhe, uNick Young (Henry Golding) kumtshato womhlobo wakhe osenyongweni eSingapore. Ukufika kwakhe, ufunda ukuba ayingobutyebi bukaNick kuphela osisityebi kodwa ukwangomnye wabafundi abafanelekileyo belizwe. URachel uza kuhamba njani kweli hlabathi litsha lobutyebi kunye nobuhle ... kunye nonina ongakholwayo?
35. 'Luhlaza okwesibhakabhaka ngowona mbala ufudumeleyo' (2013)
Xa u-Adèle (Adèle Exarchopoulos) oneminyaka eyi-15 edibana no-Emma oneenwele eziluhlaza okwesibhakabhaka (uLéa Seydoux), kubangela into ngaphakathi kuye. Abaphulaphuli bayo yonke iminyaka baya kuthathelwa ingqalelo leli bali linzima nelithandekayo laseFrance eliguqukayo kwisithuba seminyaka elishumi. (Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Ziiyure ezintathu ubude, ke qiniseka ukukrola ixesha elaneleyo kwishedyuli yakho.)
36. 'Kubo bonke abafana endibathandileyo ngaphambili' (2018)
U-Lara Jean (uLana Condor) uzigcina eyedwa-kangangokuba unonobumba wothando kwigunjana lakhe, apho avuma khona iimvakalelo zakhe kuye ngamnye otyumkileyo. Xa udadewabo omncinci (uAnna Cathcart) ngempazamo ethumela iileta, kwabakho ukungcungcutheka.
37. 'Idayari kaBridget Jones' (2001)
Sithanda ukuqalekisa, ukubhuqa kunye nokuhleka kakhulu uBridget Jones (uRenée Zellweger) kanye njengokuba ekule vidiyo ingenakuphikiswa eyazala ezimbini. Ukuba kukho into enye esasele mpikiswano: Ngaba uliqela likaDarcy okanye iqela uCleaver? (Umbuzo onamaqhinga: UDarcy, ngokucacileyo.)
38. 'Ukuba iBeale Street Inokuthetha' (2018)
UTish noAlonzo (Fonny) bebengabahlobo ukusukela ebuntwaneni kodwa izicwangciso zabo ngekamva ziye zaphazamiseka xa uFonny ebanjelwe ulwaphulo-mthetho angalwenzanga. Ukusekwa ngo-1970s eHarlem, le flick ihamba ngokujikeleza izibophelelo ezingenakuqhekeka kunye nemingcipheko ekufuneka bayoyise ukuze babe kunye. Udutyulwe kakuhle, uya kumangaliswa (kwaye ulile) ngeli bali lichukumisayo lothando.
Ngaphantsi kweMifanekiso yakho
39. 'Ukudanisa okungcolileyo' (1987)
Xa uFrances 'Baby' Houseman (uJennifer Grey) echitha ihlobo kwindawo yokuhlala eCatskills nosapho, uyathandana nomqeqeshi womdaniso wenkwenkwe ongalunganga, uJohnny Castle (uPatrick Swayze). Ibali leklasi elinemimangaliso embalwa kodwa siza kuyibukela kaninzi oko kunyusa.
40. 'Ityala leenkwenkwezi zethu' (2014)
Ukuba awunakuyeka ukulila ngexesha Uhambo onokulikhumbula , yile movie yakho. Yazisa ababukeli kwizigulana ezibini ezinomhlaza ezibulala abantu abangenathemba: I-Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) kunye neGus Waters (Ansel Elgort). Eli libali labo elibuhlungu.
41. 'Ngenye imini' (2011)
Ngokuqinisekileyo, olu tshintsho kwifilimu evela kwinoveli kaDavid Nicholls yoshicilelo enegama elifanayo ayisiyiyo ugqibelele (U-Anne Hathaway's accent, ngakumbi, ufumene uninzi lweflack) kodwa akunakwenzeka ukuba ungathandani noDex noEmma njengoko sibukele aba bahlobo babini badibana kwangolo suku lunye ngaphezulu kweminyaka eli-18.
Imifanekiso eshukumayo yeWalt Disney Studios
42. 'ISindululo' (2009)
UMargaret Tate (uSandra Bullock) ngumhleli oyintloko wenkampani epapasha iincwadi, kwaye uAndrew Paxton (Ryan Reynolds) ngumncedisi wakhe osebenza nzima. Xa uMargaret ejongene nokugxothelwa eCanada, wagqiba kwelokuba atshate noAndrew ukuze agcine ubume bakhe bevisa, kwaye endaweni yokunikezela ngoAndrew. Sicinga ukuba unokuqikelela ukuba kwenzeka ntoni ngokulandelayo (hilarity nothando, kunjalo).
43. 'Intaba eBrokeback' (2005)
Le tale ihambisayo yokuthandana ngokufihlakeleyo phakathi kweenkomo ezimbini inamandla, ibuhlungu kwaye yenziwa kakuhle. Ibali lijolise kumlusi ogama linguJoe Aguirre (uRandy Quaid), oqesha uJack Twist (uJake Gyllenhaal) kunye no-Ennis Del Mar (Heath Ledger) ukuba basebenze kwifama yakhe.
44. 'Xa uHarry wadibana noSally' (1989)
UMeg Ryan, uNora Ephron kunye neBig Apple-umdlalo owenziwe kwi-rom-com yezulu. Yifilimu emnandi malunga ne-New Yorkers ye-quirky (i-Billy Crystal ifakiwe) abaqinisekileyo ukuba amadoda nabasetyhini abanakuba ngabahlobo-okanye banako?
Konke okufuneka ukwazi kukuba iinkwenkwezi zikaBarbra Streisand kwezi zinto zichaseneyo zitsala ibali lothando olwenzeka kwisithuba seminyaka eliqela. Kulungile, uRobert Redford naye ukwinkwenkwezi kwifilimu, kwaye iyathandeka ngokungathandabuzekiyo. Isiphelo.
46. ​​'Phambi kokuphuma kwelanga / Phambi kokutshona kwelanga / Phambi kwaphakathi kobusuku' (1995/2004/2013)
Kwibhanyabhanya yokuqala, indoda yaseMelika uJese (Ethan Hawke) kunye nomfazi waseFrance uCéline (uJulie Delpy) badibana kuloliwe, behla eVienna kwaye bachitha ubusuku bejikeleza isixeko, bethetha bethandana. Ulandelelwano olulandelayo kunye ne-duo kwiminyaka esithoba kamva eParis, kwaye okwesithathu emva kweminyaka esithoba eGrisi. Uya kufuna ukubeka bucala impelaveki yonke kwaye ubabukele bonke. Sithembe.
47. 'Umguli oliNgesi' (1996)
Olu hlengahlengiso lweenkwenkwezi zenoveli zikaMichael Ondaatje uRalph Fiennes kunye noKristin Scott Thomas njengabantu ababini abathandekayo eMntla Afrika ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Ifumene amagama atyunjiweyo ali-12 kwii-69th Academy Awards ngo-1997 kwaye yaphumelela amabhaso alithoba kubandakanya noMfanekiso oBalaseleyo. Ukuba awungxoli ngokuphela, uya kuba sisilo. Ukuhlekisa kuphela. (Yohlobo lwe.)
48. 'UMtshato woMhlobo wam oMnandi' (1997)
U-Julia Roberts ungumntu othandekayo kule romance ye-screwball, kodwa sisimo sefilimu esimangalisayo esenza ukuba kufanelekile ukubukelwa. Owu, kwaye singalibala njani malunga ne ukuzuza cula-ecaleni kwesigcawu sika-Aretha Franklin Ndithi Umthandazo Omncinci.
49. 'Njenge Crazy' (2011)
Awusoze ulibale uthando lwakho lokuqala, kodwa ngelishwa lomfundi wase-Bhritane (Felicity Jones) kunye nomlingane wakhe waseMelika (u-Anton Yelchin), ibali labo lothando lithatha ithuba elibi xa ephula imigaqo ye-visa yakhe kwaye banyanzelwa ukuba bahlukane. Ukuba imuvi iyaziva inyani-kubomi, kusenokwenzeka ukuba uninzi lwayo lwalulungisiwe.
50. 'Uphulukene noTolika'
Abantu ababini abangabaziyo (uScarlett Johansson kunye noBill Murray) benza ibhondi engalindelekanga emva kokudibana kwindawo yehotele eTokyo. Ngokusisiseko, iyinto ehambayo (kwaye ngamanye amaxesha, ehleka-ngokuhlekisayo) ifilimu malunga nokufumana unxibelelwano nomntu xa ungalindelanga.
UKate (uEmilia Clarke) udiniwe ngumsebenzi wakhe osebenza njenge-elf yonyaka wonke kwindawo yokumisa iholide. Xa ngokungalindelekanga edibana nendoda egama linguTom (Henry Golding), ngequbuliso ufumanisa eyona ntsingiselo yeKrisimesi. Alexa, dlala 'iKrisimesi yokugqibela' kwiSpotify.
Imifanekiso kaBuena Vista / Getty
52.'Izinto ezili-10 endizithiyileyo ngawe'(1999)
U-Kat Stratford (u-Julia Stiles) kunye nodadewabo omncinci, u-Bianca (u-Larisa Oleynik), ngekhe bahluke ngakumbi komnye nomnye. Ke, utata wabo (uLarry Miller) uphuhlisa umthetho wasekhaya othi uBianca akanakuthandana de uKat abe nesoka. Isicwangciso, ewe, sibuyela umva.
URicardo Hubbs / iNetflix
UNick (Damon Wayans Jr.) ebekwi-1,000 yemihla yokuqala, kwaye akakatshati. Ke, uqesha igqwetha ukuba limangalele i-app yokuthandana, ekucingelwa ukuba inezinga eliphezulu lempumelelo. Njengoko kwaxelwa kwangaphambili, uNick ufumana uthando kungekudala xa engalindelanga. (Ewe ewe, nazo ziRachael Leigh Cook.)
I-Sunset Boulevard / i-Getty Izithombe
Ngaphandle kokukhula kancinci, uForrest Gump (uTom Hanks) uyinkwenkwana enobubele nethemba, enkosi kumama wakhe omxhasayo (uSally Field). Ngokuqinisekileyo, kubuhlungu njengesihogo. Kodwa kwicala lokudibanisa, unokuzinyenyisa iintlungu ngebhokisi yeetshokholethi.
Umntu osandul 'ukutshata (uLily James) undwendwela indawo yokuhlala yomyeni wakhe, ebekwe kunxweme lwesiNgesi. Ingxaki? Akubonakali ngathi uyakulibala malunga nowayesakuba ngumfazi womyeni wakhe, uRebecca, ogama lalo libhalwe phantse ezindongeni zokuhlala.
njani ukuthintela iinwele kuwa amayeza
USimon uneminyaka eli-17 ubudala kwisikolo samabanga aphakamileyo ongazange axelele mntu-kuquka usapho kunye nabahlobo-ukuba ulifanasini. Ewe, konke oko kukutshintsha. (Emva kokuba ubukele Uthando, Simon , Qiniseka ukuba ujonge uchungechunge lwe-Hulu ngokulinganayo, Uthando, uVictor .)
UAlfonso Bresciani / iiFilimu ze-CBS
57.'Iinyawo ezintlanu zahlukene'(2019)
UStella (Haley Lu Richardson) kunye noWill (Cole Sprouse) bobabini abaguli be-cystic fibrosis. Ngenxa yokugula kwabo, abavumelekanga ukuba bachukumisane kwaye kufuneka bagcine umgama weenyawo ezintandathu. Kuba uStella ezimisele ukuphila ngemithetho yakhe, utshintsha imiyalelo kagqirha ukuya kwiinyawo ezintlanu (kungoko isihloko semovie). Izandi ziqhelekile ngendlela engummangaliso kubhubhane we-coronavirus.
Kwilinge lokuziphilisa, uLouisa Lou Clark (uEmilia Clarke) uhlala etshintsha imisebenzi. Iphulo lakhe elitsha libandakanya ukuba ngumkhathaleli kaWill Traynor (uSam Claflin), osisityebi, okhubazekileyo ebhankini ofuna umbono omtsha ngobomi.
UDaniel (uCharles Melton) kunye noNatasha (Yara Shahidi) bavela kwihlabathi ezimbini ezahlukeneyo. Ngelixa uDaniel efuna ukufezekisa ngaphezulu kokucwangciselwe abazali bakhe, uNatashia woyika ukuba usapho lwakhe luza kugxothwa. Xa bedibana ngokungakhethiyo kwaye bathandana, iintlantsi ziyabhabha. (Ungayichazanga, isekwe kwi Incwadi yamagama kaNicola Yoon .)
Ifoto nguBrendon Thorne / Getty Izithombe
60.'Uthando kunye nezinye iziyobisi'(2010)
UJamie Randall (uJake Gyllenhaal) yinzwakazi ethengisa amayeza engazange ibe nomcimbi wokuchola abantu basetyhini kushishino oluqhutywa ngabantu ababhinqileyo. Xa edibana nesigulane esincinci sikaParkinson ogama linguMaggie (u-Anne Hathaway), bahlakulela ubudlelwane obusondeleyo engazange abone ukuza.
Ezinxulumene: Iimuvi eziMnandi zikaMama ezingama-48 xa ufuna ukuhleka
61. 'Uthando lukaSylvie'
Ukususela kwiingubo ezimangalisayo ze-50s kunye namanqaku omculo kuTessa Thompson kunye noNnamdi Asomugha we-chemistry enhle, akunakwenzeka ukuba ungathandani nale filimu. Uthando lukaSylvie kulandela ubudlelwane obunothando phakathi komnqweno wefilimu uSylvie Parker (Thompson) noRobert Halloway (Nnamdi Asomugha), imvumi yejazz esokolayo.
62. 'Southside nawe' (2016)
Ukuba sele uyigqibile yonke imemo kaMichelle Obama ethengisa kakhulu, ke sele ufumene umbono wokuba ibali lakhe lothando nalowo wayesakuba nguMongameli wase-US u-Barack Obama laqala njani. Kolu thando luthandekayo, uParker Sawyers kunye noTika Sumpter babonisa isibini esithandekayo njengoko babephuma ngomhla wabo wokuqala ngo-1989.
Idrama ebhalwe ngobomi bakhe ibalisa ngobomi bokwenyani bukaRichard noMildred Loving, abamangali abancedise ukuvula indlela kwizibini ezitshatileyo ezitshatileyo ngetyala leNkundla ePhakamileyo iLoving v. Virginia ngo-1967.
64. 'Omangalisayo uJessica James' (2017)
Emva kokuchitha ukwahlukana okubuhlungu kunye nesithandwa sakhe sangaphambili, uJessica James (UJessica Williams) ubetha ubudlelwane obutsha kunye nomntu ongalindelekanga. Iyakwenza uhleke kwaye ndikunike zonke iimvakalelo.
65. 'Soloko' (2011)
Umdlalo ochukumisayo waseMzantsi Korea ulandela umntu ophetheyo kwindawo yokupaka kunye nowayengumntu wamanqindi owela kwintombazana engaboniyo. Lungisa izicwili, kuba izaliswe ziinyembezi.
ZIQHELEKILEYO: Ezama-60 eziBalaseleyo zeMidlalo yoLuntu yeXesha lonke
Izigaba Iinto Zokuzilungisa Ifashoni Yomtshato Ulwazi Kunye Nemfundo
Eyona midlalo bhanyabhanya ye-Netflix yokuqala
Ifashoni icaphula uMarilyn Monroe
Uluhlu lwezitya zaseTshayina
Inkqubo ye-yoga asanas kunye nezibonelelo
iingcebiso zokuhombisa amanenekazi